डिस्क ब्रेक के हो? यी हुन् फाइदा र बेफाइदा - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
डिस्क ब्रेक के हो? यी हुन् फाइदा र बेफाइदा
काठमाडौं– प्रविधिको विकाससँगै आउने उत्पादनमा नयाँ नयाँ विशेषताहरु थपिन्छन्। जसले उपभोक्तालाई नयाँ अनुभुतिका साथै सुरक्षामा समेत आयामहरु थप्दै गएको हुन्छ। यो सवारीसाधनमा समेत लागू हुने नै भयो।
सवारीसाधनमा विगनमा ड्रम ब्रेक हुन्थ्यो, जुन अहिले पनि चल्तिमै छ। तर पछिल्लो समय आउने सबैजसो दुईपांग्रे सवारीमा डिस्क ब्रेक हुने गरेको छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा हुने डिस्क ब्रेक अहिले चल्तीको विशेषता भइसकेको छ। केही वर्षअघिसम्म महंगा र ठूला मोटरसाइकलमा मात्र सीमित यो विशेषता अहिले इन्ट्रिलेवलका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा समेत डिस्क ब्रेक उपलब्ध हुन थालेको छ।
हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध १५० सिसी इन्जिन क्षमताका सबै मोटरसाइकलमा डिस्क ब्रेक रहेका छन्। त्यसमा पनि अगाडि र पछाडि दुबै चक्कमा डिस्क ब्रेक उपलब्ध हुन थालेका छन्। १५० सिसी क्षमताको बजाज पल्सर १५०, टिभिएस अपाचे आरटिआर १६० फोर भी, यामाहा एफजेडएस भी थ्री, जिक्सर १५० जस्ता मोडलमा अगाडि र पछाडि दुवै चक्कामा डिस्क ब्रेकका सुविधा छ।
के हो डिस्क ब्रेक?
डिस्क ब्रेक एउटा नयाँ ब्रेकिङ प्रविधि हो। मोटरसाइकल तथा स्कुटरको पांग्रामा एउटा डिस्क राखिएको हुन्छ। यसको सहायताले मोटरसाइकलको ब्रेकिङ निकै नै प्रभावकारी हुन्छ। यसले मोटरसाइकलको गतिलाई नियन्त्रण गर्नुपरेमा सहजता प्रदान गर्छ।
मेटरसाइकलको अघिल्लो टायरमा राखिएको डिस्क ब्रेकको भूमिका करिब ७० प्रतिशत हुन्छ भने पछिल्लो टायरमा राखिएको डिस्कको भूमिका ३० प्रतिशत हुन्छ। मेटरसाइकल गुडिरहदा तातो हुनुका साथै घर्षणका कारण ब्रेक शु पनि तातिने भएकाले यसले प्रभावकारी रुपमा काम नगर्न पनि सक्छ। त्यसैले लामो समय मोटरसाइकल गुडेको समयमा होसियारीका साथै ब्रेक लगाउनु पर्छ।
डिस्क ब्रेकले ड्रम ब्रेकको तुलनामा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म चाँडो मोटरसाइकलको गतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यस्तोमा दुर्घटनाबाट जोगाउन सहयोग पुग्छ। ड्रम ब्रेकको तुलनामा डिस्क ब्रेकलाई बढी सुरक्षित मानिन्छ।
डिस्क ब्रेकलाई रिमको आवश्यकता नपर्ने भएकाले यसले हिलो र सुख्खा मौसममा पनि एकनासको सुरक्षा दिनसक्छ। ड्रम ब्रेकमा हिलो र धुलोको असर धेरै हुने गर्छ। यसलाई प्रयोग गर्नपनि सहज मानिन्छ।
यसमा कम शक्ति खर्च गर्दा पुग्छ। यसलाई जुनसुकै अवस्थाको सडकमा पनि एकनासले प्रयोग गर्न सकिन्छ भने पानी परेको बाटोमा पनि यसको पर्फमेन्स उत्कृष्ट रहनेछ।
डिस्क ब्रेकका केही बेफाइदा पनि छन्। डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेकको तुलनामा धेरै गह्रौँ हुन्छ। उच्च गतिमा डिस्क ब्रेकको अपर्झट प्रयोग गर्दा केही कठिन रहेको प्रयोगकर्ताहरुले बताउँछन्।
डिस्क ब्रेकको मेन्टिनेन्स ड्रमको तुलनामा बढी गर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा प्रयोग हुने ल्यूब, बेला बेलामा जानु पर्ने सर्भिस सेन्टर जस्ता कारण यो ड्रमको तुलनामा केही महंगो समेत छ। यद्यपि ड्रम ब्रेकको रिममा गर्नु पर्ने खर्चभन्दा डिस्क ब्रेकको मर्मत खर्च कम लाग्ने गरेको छ।
हाम्रो सोच्ने शैली बदल्ने श्रीमद्भगवत गीताका मन छुने भनाईहरु